RASMI: Daniele Rugani oo heshiiska u kordhiyey kooxdiisa Juventus – Gool FM
(Turin) 29 Maarso 2019. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa ku dhawaaqday inuu heshiiska u ballaariyey ciyaaryahankeeda Daniele Rugani.
Daniele Rugani waxa uu kooxdiisa Juventus qalinka ugu duugay heshiis cusub oo afar sanadood ah, kaasoo sii tixnaan doona illaa sanadka 2023-ka.
Juve waxa ay warkan ku xaqiijisay website-keeda rasmiga ah, halka Gazzetta dello Sport ay hore u sheegtay in Rugani uu ku qaadan doono 3 milyan oo euro xilli ciyaareedka cusub.
24-sano jirkaan ayaa la filayay inuu ku soo bilowdo safka hore xilli ciyaareedkaan si joogto ah, laakiin soo laabashada Leonardo Bonucci ayaa xadiday waxaana uu ku soo bilowday safka hore kaliya 14 kulan.
Si kastaba ha ahaatee, Bianconeri ayaa lagu soo waramayaa inay diiday dalabyo ay ka heleen kooxdaChelsea xagaagii lasoo dhaafay oo ay ku doonayeen difaacan, kaasoo 7 kulan u saftay xulka qaranka Talyaaniga.